““ကက်သလစ်သာသနာတော်တွင် Dogma ယုံကြည်ရာအချက်ပေါင်း ၂၅၅ ခုရှိသည်”” ဟု ဘုန်းတော်ကြီး ဒေါက်တာ ဒိုမီနစ်သက်တင် မိန့်ကြား - Gloria News Journal
““ကက်သလစ်သာသနာတော်တွင် Dogma ယုံကြည်ရာအချက်ပေါင်း ၂၅၅ ခုရှိသည်”” ဟု ဘုန်းတော်ကြီး ဒေါက်တာ ဒိုမီနစ်သက်တင် မိန့်ကြား
ဂလိုရီယာသတင်းဂျာနယ်မှ တတိယအကြိမ် ဦးဆောင်ကျင်းပသော ကက်သလစ်သာသနာတော်၏ ယုံကြည်ရာအချက်များ (Catholic Dogmatic Forum) ဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲ (စိန်မေရီ၊ ရန်ကုန်)
ဂလိုရီယာသတင်းဂျာနယ်တိုက်မှ မတ်လ (၂၀) ရက်နေ့၌ တတိယအကြိမ်အဖြစ် ဦးဆောင်ကျင်းပသော ““ကက်သလစ်သာ သနာ တော်၏ယုံကြည်ရာအချက်များဆိုင်ရာ ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ”” ၌ ဟောပြောဆွေးနွေးပေးတော်မူသော ရန်ကုန်မြို့တော်ရှိ စိန်မေရီ ကာသီဒြယ်ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး ဒေါက်တာဒေါမီနစ်သက်တင်က ““ကက်သလစ်သာသနာတော်တွင် ယုံကြည်ရာ အချက်ပေါင်း ၂၅၅ ချက်နှင့် ယုံကြည်ရာအချက်အဆင့်သို့ မရောက်သေးသော အမှန်တရားအပေါင်း ၁၀၂ ခု ရှိသည်”” ဟု မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။
၄င်းဟောပြောဆွေးနွေးပွဲကို စိန်မေရီကာသီဒြယ်ဘုရားကျောင်းဝင်းရှိ၊ သာသာနာ့ခန်းမဆောင်တွင် ကျင်းပရာ၊ ပရိသတ်ပေါင်း (၂၀၀) ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ရန်ကုန်မြို့တော် ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းပေါ်ရှိ စိန်မေရီကာသီဒြယ်ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီး ဒေါက် တာဒေါမီနစ်သက်တင်က အားပါးတရ ဆွေးနွေးဖြေကြားပေးတော်မူသည်။
ပထမဦးစွာ ဘုန်းတော်ကြီးသက်တင်က ကက်သလစ်သာသနာတော်၏ ယုံကြည်ရာအချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ““ယုံကြည်ရာ အချက် Dogma များသည် ကျယ်ပြန့်နက်နဲပြီး ယနေ့ဟောပြောဆွေးနွေးချိန် နှစ်နာရီသာရသောကြောင့် ယုံကြည်ရာအချက်ရဲ့ အခြေခံ သဘောတရားလောက်သာ ဟောပြောဆွေးနွေးနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ နောက်နောင်အခွင့်အရေးပေးပါက အခြားသောဘုန်းတော်ကြီး များကိုပါ ဖိတ်ခေါ်ပြီး သုံးလေးရက်လောက် ဟောပြောဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုလျှင် ပိုမိုအကျိုးရှိမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုဆွေးနွေးပွဲကို ဦးဆောင်ကျင်းပပေးသော ဂလိုရီယာသတင်းဂျာနယ်၏ အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်သော ဂျိုးဇက်ဝင်းလှိုင်ဦးအား ပန်ကြား မေတ်္တာ ရပ်ခံခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ဘုန်းတော်ကြီးဒေါက်တာသက်တင်က ကက်သလစ်သာသနာတော်၏ယုံကြည်ရာအချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ““ကက်သလစ် သာသနာတော်သည် ဘုရားသခင် ဗျာဒိတ်တော်တွင်ပါဝင်သော သို့မဟုတ် ဗျာဒိတ်တော်နှင့်မဖြစ်မနေ ဆက်နွယ်နေ သော အမှန်တရားတစ်ခုကို ခရစ်ယာန်များ အတွက် မယုံမနေရသဘောဖြင့် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်း၍ မရနိုင်သောယုံကြည်သက်ဝင်မှု မျိုးဖြင့် လက်ခံစေသောအခါ အသင်းတော်၏ သွန်သင်မှုအာဏာတွင် ယုံကြည်ရာအချက်များ၏ပြဌာန်းချက်ကို အမိန့်အာဏာပုံစံ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာရာတွင် ခရစ်တော်သခင်ထံမှ ရရှိသော အခွင့်အာဏာကို အဆင့်အမြင့်ဆုံးအနေအထားတွင် အပြည့်အ၀ အသုံးချလျက် ရှိ၏”” ဟု ““ကက်သလစ်သာသနာတော်၏ မြတ်သောအယူဝါဒ၊ နံပါတ် ၈၈”” တွင် တိတိလင်းလင်း ဖော်ပြထားသည် ဟု အစချီ မြွက်ကြားတော်မူသည်။
ထို့အပြင် ဘုန်းတော်ကြီးသက်တင်က ကက်သလစ်သာသနာတော်၏ယုံကြည်ရာအချက်များသည် ““အသင်းတော်၏သန့်ရှင်း မွန် မြတ်သော ရှေ့ထုံးသက်သေများ sacred tradition၊ သမ်္မာကျမ်းစာတော်မြတ် sacred scripture နှင့် တမန်တော်မှရရှိ လာသော သာသနာတော်၏ သွန်သင်ခွင့်အာဏာ magisterium”” များပေါ်တွင် အခြေခံပြီး ဆင်းသက်လာကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ယုံကြည်ရာအချက်များသည် ၄င်းအခြေခံ (၃) နှင့်ကင်းကွာပြီး မသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း”” ဖြင့် မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပါသည်။
ဘုန်းတော်ကြီးသက်တင်က ကက်သလစ်သာသနာတော်ရဲ့ သွန်သင်ချက်နှင့် ယုံကြည်ရာအချက်တို့နှစ်ခု၏ ကွာခြားချက်များကို ရှင်းပြရာတွင် ““ကက်သလစ်သာသနာတော်၏သွန်သင်ချက်များဆိုသည်မှာ ယေဘုယျအားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်း၊ လူ့ကျင့်ဝတ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် ကက်သလစ်သာသနာတော်၏ သွန်သင်ချက်များဖြစ်ပြီး၊ ထိုအထဲတွင် ယုံကြည်ရာအချက်များနှင့် အသင်းတော်က ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဆိုပြုပြဌာန်းထားပြီး ယုံကြည်ရာအချက်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် သွန်သင်ချက်များလည်း ပါဝင်ကြောင်း၊ ယုံကြည်ရာအချက်များ ဆိုသည်မှာ သမာကျမ်းစာတော်မြတ်နှင့်သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သောထုံးတမ်းအစဉ်အလာတွင် တွေ့ရသည့် တရားဝင်ဘုရားဗျာဒိတ်တော်များကို ကက်သလစ်သာသနာတော်က လေးလေးနက်နက် တိတိကျကျ ဖွင့်ဆိုပြဌာန်းထုတ်ပြန်ထား သော ယုံကြည်ရာအချက်များကို ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်များသည် ဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းမပြုဘဲလျက်၊ အကြွင်းမဲ့သမာတရားဖြစ်တော် မူသော ဘုရားတန်ခိုးအာဏာတော်၏ပါရမီအားဖြင့် မှန်ကန်သေချာသည်ဟု လက်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သာသနာတော်၏ မမှားနိုင်သော သွန်သင်ခြင်းအားဖြင့် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းအတွက် အဆိုပြုလာသော အမှန်တရား၌ ရွေးချယ်ကောက်ယူစရာ နေရာမရှိကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ““ဆေးကြောခြင်းမင်္ဂလာခံယူထားသူတစ်ဦးက ယုံကြည်ရာအချက်တစ်ခုခုကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ငြင်းဆန်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ဆန့်ကျင်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ထိုသူ (သို့မဟုတ်) သူမသည် မိစ်္ဆာဒိဋိအပြစ်ကို ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်ရာ သာသနာတော်မှဖယ်ကျဉ်ခြင်း အပြစ်ဒါဏ်ကို အလိုအလျောက် ခံရပြီဖြစ်ကြောင်း ကက်သလစ်သာသနာတော်ကာနွန်ဥပဒေ ၇၅၁ ကို ကိုးကားပြီး ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ဘုန်းဘုန်းက ““ကက်သလစ်သာသနာတော်တွင် သာသနာတော်မှဖယ်ကျဉ်ခြင်းကို အလွန်ရှားရှားပါးပါးကျင့်သုံးလေ့ ရှိကြောင်း၊ သာသနာတော်မှ ဖယ်ကျဉ်ခြင်းဆိုရာ၌ ကက်သလစ်သာသနာတော်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ကက်သလစ်သာ သာနာတော်၏ ကာနွန်ဥပဒေ ၁၃၃၁ ပါအမှုတော်မြတ်တို့၌ ပါဝင်ခြင်းမပြုရန်တားမြစ်ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော် မြတ်ကို မပင့်ယူနိုင်သော်လည်း မစ်္ဆားပူဇော်ခြင်း၊ ဆုတောင်းမေတ်္တာပြုခြင်းများ၌ပါဝင်ရန် တာဝန်ရှိသကဲ့သို့ နောင်တသံဝေဂဖြင့် ပြန်လာကာ ကက်သလစ်သာသနာတော်တွင် တက်တက်ကြွကြွ ပြန်လည်ပါဝင်လာနိုင်ရေးကို ရှေးရှုလျက် ကက်သလစ်သာသနာ တော်နှင့်ဆက် စပ်ရေးကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် အားပေးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ ဗျာဒိတ်တော်ပေးထားသော အမှန်တရားယုံကြည်ရာအချက်များ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ကက်သလစ် ယုံကြည်ခြင်းဆိုင်ရာ သွန်သင်ချက်များအဖြစ် လည်းကောင်း၊ အသင်းတော်သွန်သင်သမျှအားလုံးသည် မှားယွင်းခြင်းသို့ မရောက်နိုင်ကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဓမ်္မညီလာခံအစည်းအဝေးကြီးတွင် ဆရာတော်ကြီးများက ရှင်ပီတာ၏အရိုက်အရာကို ဆက်ခံသော ရဟန်းမင်းကြီးနှင့်အတူ ယုံကြည်သူများအား ယုံကြည်လက်ခံရမည့်အမှန်တရား၊ ကျင့်ကြံရမည့်မေတ်္တာတရား၊ မျှော် လင့်ရမည့် မင်္ဂလာတရားများ သွန်သင်သည့်အခါ အမြင့်ဆုံးသောသွန်သင်ပိုင်သည့်အာဏာကို ကျင့်သုံးကြသောအချိန်တွင် ဤမမှားယွင်းနိုင်ခြင်းသည် ဆရာတော်များအဖွဲ့အစည်းတွင် ရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း၊ မြတ်သောအယူဝါဒ အပိုဒ် ၈၉၁ ကို အောက်ပါကျမ်းပိုဒ်များယှဉ်တွဲလျက် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါသည်။
ကက်သလစ်အသင်းတော်သည် ယုံကြည်ခြင်း၊ လူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသွန်သင်ခြင်းများတွင် မမှားနိုင်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်၏အိမ်ထောင်စုသည်ကား အသက်ရှင်သောဘုရားသခင်၏ အသင်းတော် ဖြစ်သည်။ ထိုအသင်းတော်ကား သမ်္မာတရား၏ မဏ္ဍိုင်နှင့်သမ်္မာတရားတည်ရာလည်း ဖြစ်သတည်း။ (ပထမတိမောတေ ၃း၁၅) ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏သော့ကိုလည်း သင့်အား ငါပေးမည်။ ကမ်္ဘာမြေပေါ်တွင် သင်ချည်နှောင်သမျှသည် ကောင်းကင်ဘုံတွင် ချည်နှောင်လျက် ရှိလိမ့်မည်။ ကမ်္ဘာမြေပေါ်တွင် သင်ဖြေလွှတ်သမျှသည်လည်း ကောင်းကင်ဘုံတွင် ဖြေလွှတ်လျက် ရှိလိမ့်မည်။ (ရှင်မာတေဦး ၁၆း၁၉)
ဂလိုရီယာသတင်းဂျာနယ်၏အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်သော ဂျိုးဇက်ကုန်ဇမှုန်းက ““ရဟန်းမင်းကြီးအတု နဲ့အစစ်ကို ဘယ်လိုခွဲခြားခဲ့ကြ သနည်း။ ထိုအတုအယောင်ရဟန်းမင်းကြီးများက ယုံကြည်ရာအချက်တွေကို ကြေငြာခဲ့တာမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား”” ဟူသော မေးခွန်းကို ဘုန်းဘုန်းဒေါက်တာသက်တင်က ““အေဒီ ၁၃၇၈ မှ ၁၄၂၃ အတွင်း တရားဝင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားခြင်း ခံရသော ရှင်ပီတာ၏ အရိုက်အရာကို ဆက်ခံသည့် ရောမမြို့၏ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးများလည်း ဖြစ်၊ ရဟန်းမင်းကြီးလည်းဖြစ်ကြကုန်သော အူးရ်ဘန်း (၆)၊ ဘိုနီဖေ့စ် (၉)၊ အင်နိုစဲန့် (၇)၊ ဂရေဂေါ်ရီ (၁၂)၊ မာတင်း (၅) တို့အား ဆန့်ကျင်ပြီး၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ အာဗီနောင် ဟူသော မြို့တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံမှကာဒီနယ်အချို့က ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည့် ရဟန်းမင်းကြီးအတုများ ဖြစ်ကြသော ကလေးမင်း (၆) က အေဒီ ၁၃၇၈ မှ ၁၃၉၄ အထိလည်းကောင်း၊ ဘေနေဒစ် (၁၃) က အေဒီ ၁၃၉၄ မှ ၁၄၂၃ အထိ လည်း ကောင်း ရှိခဲ့ကြကြောင်း၊ ရဟန်းမင်းကြီးအတုများ ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းမှာ ရဟန်းမင်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် တရားဝင်မ၀င် အပေါ် အငြင်းပွားမှုများ၊ မကျေနပ်မှုများကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကက်သလစ်သာသနာတော်သမိုင်းတွင် အတုအယောင် ရဟန်းမင်း ကြီးများ၏ သွန်သင်ချက်များ ရှိကောင်းရှိနိုင်သော်လည်း ထိုသူတို့၏မည်သည့်သွန်သင်ချက်ကိုမျှ ကက်သလစ်သာသနာတော် အနေဖြင့် ယုံကြည်ရာအချက်အဖြစ် သွန်သင်ခဲ့သည်ဟု မိမိအနေဖြင့် မသိပါကြောင်းနှင့် ထိုကဲ့သို့ ရှိမည်လည်း မဟုတ်ပါကြောင်း ကို ရှင်းလင်ဖြေကြားပေးခဲ့သည်။
ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာသော ပရိသတ်တစ်ဦးက ““စူးစမ်းလိုစိတ်ဖြင့် ယုံကြည်ရာအချက်တစ်ခုခုအပေါ် နားလည်အောင် သိချင်တာကြောင့် ချက်ချင်းမယုံဘဲ လေ့လာမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလဲ”” ဆိုတဲ့မေးခွန်းအပေါ် ဘုန်းဘုန်း သက်တင်က ““ကျွန်ုပ်တို့ကက်သလစ်ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ထံမှ လာသော ကျေးဇူးတော်ဖြစ်ကြောင်း၊ ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူမရ နိုင်သကဲ့သို့ အားထုတ်လုံးလစိုက်၍လည်း မရနိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် စကားစစ်ထိုး၊ ငြင်းခုံစူးစမ်းရာ မဟုတ်သကဲ့သို့ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းပြီး မရနိုင်သောယုံကြည်သက်ဝင်မှုမျိုး ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်သူဟူသမျှသည် ကိုယ်တော် တည်ရှိတော် မူကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်သည် မိမိအား ရှာသောသူတို့ကို အကျိုးကျေးဇူးပေးတော်မူသည်ကိုလည်း ကောင်း၊ ယုံကြည်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း (The Council of Trent, Sess. V, Heb. 11:6) ဖြင့် ရှင်းလင်းဖြေကြားပေးခဲ့သည်။
ဆက်လက်ပြီး ဂျိုးဇက်ဝင်းလှိုင်ဦးက ““အမှန်တရား (၁၀၂) ချက်တွေက တစ်ချိန်ချိန်မှာ ယုံကြည်ရာအချက်များ အဖြစ်သို့ ရောက်လာ နိုင် ပါသလား”” ဟု မေးမြန်းချက်အပေါ် ဘုန်းဘုန်းသက်တင်က ““ဒီယုံမှားဖွင့်မရှိသောအမှန်တရားပေါင်း (၁၀၂) ချက်များသည် ယုံကြည်ရာအချက်များအဆင့်သို့ ရောက်လာနိုင်ကြောင်း၊ မည်သည့်နေရာမည်သည့်အချိန်ပင် ဖြစ်စေ ဤယုံမှားဖွယ်မရှိသော အမှန် တရားများကို မည်သည့်အခါမျှ မှားသည်ဟု မသွန်သင်နိုင်ကြောင်း”” ဖြင့် ရှင်းပြပေးခဲ့သည်။
ဒေါက်တာရှီလာက ““အင်္ဂလိပ်လို solemnity ဘာသာရေးပွဲနေ့ကြီးတွေမှာ ဘုရားကျောင်းမတက်ဘူးဆိုရင် အပြစ်ရှိသလား”” ဟု မေးရာ ဘုန်းတော်ကြီးသက်တင်က ““တတိယပညတ်တော်တွင် ဥပုသ်နေ့တို့ကို စောင့်ကိုကြလော့ဟု ဆိုထားပြီး၊ ကက်သလစ် သာသနာတော်၏ ပထမနှင့်စတုတ်္ထကျင့်ဝတ်တွင်လည်း တနင်္ဂနွေနေ့နှင့်ဘာသာဝတ်္တရားပွဲနေ့တို့တွင် မစ်္ဆားတရားတော်မြတ်ကို နာယူကုန်လော့ (ကာနွန်ဥပဒေ ၁၂၄၆ – ၁၂၄၈၊ မြတ်သောအယူဝါဒ ၂၁၆၈၊ ၂၀၄၂) ဟု ညွန်ကြားထားရာ တနင်္ဂနွေနေ့နှင့် ဘာသာဝတရားပွဲနေ့တို့တွင် မစ်္ဆားတရားတော်မြတ်ကို နာယူကြရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘာသာဝတ်္တရားပွဲနေ့မှန်းလည်း သိတယ်၊ ကျန်းမာရေးလည်း ကောင်းတယ်၊ အခြားကြီးလေးသော အကြောင်းတစ်စုံတရာလည်း မရှိ၊ ဘုရားကျောင်းလည်း တက်နိုင်ပါလျက် မတက်ခဲ့ပါမူ အပြစ်ဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း၊ တနင်္ဂနွေနေ့အားလုံး၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့၊ ဘုရားမယ်တော်ပွဲ၊ ဇန်န၀ါရီလ ၆ ရက်နေ့၊ မင်းသုံးပါးပွဲ၊ မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့၊ စိန်ဂျိုးဇက်ပွဲနေ့၊ သခင်ယေဇူးမိုးကောင်းကင်သို့ တက်ကြွတော်မူသောပွဲ၊ ကိုယ်တော်ရှင်၏ အသွေးတော်နှင့်အသားတော်ပွဲ၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့ ဖြစ်သော စိန်ပီတာနှင့်ပေါလူးပွဲနေ့၊ သြဂုတ်လ (၁၅) ရက်နေ့ ဖြစ်သော မယ်တော်သခင်မ၏ မိုးကောင်းကင်သို့ပင့်ဆောင်ခံရသောပွဲ၊ နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော ရဟန်္တာအပေါင်းပွဲ၊ ဒီဇင်ဘာ လ ၈ ရက်နေ့ အပြစ်မဲ့သနွေယူတော်မူသော သခင်မပွဲ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ ခရစ်တော်မွေးနေ့များသည် ဘာသာဝတ်္တရား ပွဲနေ့များ ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုနေ့ရက်များတွင် မစ်္ဆားတရားတော်မြတ်ကို နာယူရန် တာဝန်ရှိကြောင်း ပြန်လည် ဖြေကြားပေး ခဲ့ပါသည်။
နောက်ထပ်ပရိသတ်အမျိုးသားတစ်ဦးက ““သနေ်္ဓတားဆေးကို သုံးတာ ဒါမှမဟုတ်ရင် ကိုယ်ဝန်ကိုဖျက်ချတယ်ဆိုရင် ဘယ်အချိန်မှာ ဘုရားသခင်က သူ့ကို အခွင့်လွှတ်သလဲ”” ဟူသော မေးခွန်းကို မေးမြန်းရာ ဘုန်းဘုန်းသက်တင်က ““ပထမရာစုနှစ်မှစပြီး ကက်သ လစ်သာသနာတော်က ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရန်ကြိုးပမ်းမှုတိုင်းသည် ဆိုးဝါးကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပြီး ယနေ့တိုင်မပြောင်းမလဲ တည်ရှိနေ ဆဲပင် ဖြစ်ကြောင်း၊ သနေ်္ဓဖျက်ချခြင်းတွင် ကိုယ်ထိလက်ရောက်ပါဝင်ခြင်းသည် ကြီးလေးသော ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း (မြတ်သောအယူဝါဒ ၂၂၇၁၊ ၂၂၇၂)၊ ၄င်းပြစ်မှုကိုကျူးလွန်သူအား ထိုပြစ်မှု၏ကျယ်ပြန့်သည့်သဘောသဘာဝအရ ကာနွန် ဥပဒေက ချမှတ်ထားသော အချက်အလက်များနှင့်အညီ သာသနာတော်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်းဒဏ် (ကာနွန်ဥပဒေ ၁၃၁၄၊ ၁၃၂၃ – ၁၃၂၄) ခံရနိုင်ကြောင်း၊ ၄င်းနေရာတွင် ကက်သလစ်သာသနာတော်သည် သနားညှာတာခြင်းထားရှိမှုကို ကန့်သတ်ထား ရန် မရည်ရွယ်ကြောင်း၊ ပြစ်မှု၏ကြီးလေးမှု၊ အပြစ်မဲ့သူတို့၏ခံစားရသော ပြန်လည်ပြုပြင်မရသောနစ်နာမှုများကို ထင်ရှားပေါ်လွင် စေရန် သာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုအပြစ်အတွက် အမှန်တကယ်ဝမ်းနည်းကြေကွဲနောင်တရပြီး အာပတ်ဖြေခြင်းစက်္ကရမင်းကို ခံယူသည့် အခါ ဘုရားသခင်က သူမကို ခွင့်လွှတ်ပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခံရခြင်းနှင့်အပြစ်ဒဏ်သည် သီးခြားစီဖြစ်ကာ ခွဲခြားသိမြင် နားလည်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း ခံရသော်လည်း အပြစ်ဒဏ်ကိုခံထမ်းဆပ် ဖြေရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သာသနာတော်မှထုတ်ပယ်ခြင်းသည် အပြစ်ဒဏ်သာဖြစ်ပြီး အပြစ်ခွင့်မလွှတ်ခြင်း မဟုတ်ကြောင်း၊ သာသနာတော်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်း အဓိပ်္ပါယ်ကို အထက်တွင် ရှင်းပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်းဖြင့် မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။
ဘုန်းဘုန်းဂျော့ရွှေထွန်းကလည်း ““ဒီဟောပြောပွဲကို နားထောင်ချင်လွန်းတာကြောင့် သုံးဆယ်ဘုရားကျောင်းပွဲရောက်တဲ့နေရာကနေ အမှီပြန်လာခဲ့ရကြောင်း၊ ဒီကနေ့ဟောပြောဆွေးနွေးချက်တွေဟာ အင်မတန်မှ အကျိုးရှိကြောင်း”” ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အမည် မဖော် သော ပရိသတ်တစ်ဦးကလည်း ““ကိုယ်က ဘုန်းကြီးနားမှာ နေတဲ့သူဆိုတော့၊ အစက ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ ဘာသာတရား အကြောင်း အတော်ကို သိပြီ၊ ဘုန်းကြီးလို တရားဟောနိုင်ပြီလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်ထားပေမယ့် ဒီဟောပြောပွဲကို နားထောင်မှဘဲ ကိုယ်သိတာက ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာကို နားလည်လာကြောင်း”” ဖြင့် ရင်ဖွင့်စကား ပြောကြားကြသည်။
နောက်ထပ်ကချင်လူမျိုးဘာသာဝင်တစ်ဦးက ““ကက်သလစ်ရဟန်းဆိုတာ ထာဝရရဟန်းဖြစ်တယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် အဲဒီရဟန်းက မိန်းမရပြီး အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်သွားခဲ့သည်ရှိသော် ၄င်းရဟန်းသည် ဆက်လက်ပြီး ရဟန်း ဖြစ်နေသေးပါသလား”” ဟု မေးမြန်းရာ ဘုန်းဘုန်းသက်တင်က ““ ဤမေးမြန်းချက်သည် အင်မတန်ပြောင်မြောက်သော မေးခွန်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ကာနွန်ဥပဒေပညာများကို မေးမြန်းလျှင် ပိုမိုတိကျစွာဖြေကြားနိုင်မည်ဖြစ်ရာ ပိုမိုနားလည်နိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်း၊ သို့သော် မိမိနားလည်သလောက် ဖြေကြားပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆာလံ ၁၁၀း၎ တွင် ““သင်သည် မာလခိဇေဒက်နည်း တူ ထာဝရရဟန်း ဖြစ်သည်”” ဟု ပါရှိကြောင်း၊ လက်တွေ့တွင် ထိုအချက်နှင့်ဆန့်ကျင်ဖက်များ ရံဖန်ရံခါဆိုသ လို တွေ့နေရကြောင်း၊ ကာနွန်ဥပဒေအရ လူဝတ်လဲထားသော ရဟန်းနှင့်တစ်ခါသိက်္ခာတင်ပြီးလျှင် ထာဝရဟန်းဟူသော ဒသနိကဗေဒ သဘောသဘာဝ ရုပ်လွန်ရဟန်းဟူပြီး သိမ်မွေ့နုနယ်သည့် ကွဲပြားခြားနားခြင်း ရှိကြောင်း၊ ရဟန်းသိက်္ခာမင်္ဂလာ သည် ဆေးကြောခြင်းမင်္ဂလာကဲ့သို့ ပင် တစ်ခါခံယူပြီးလျှင် ပယ်ဖျက်ခံပြီး မရ၊ မဖျောက်ဖျက်နိုင်သော စက်္ကရမင်ဖြစ်ပြီး (မြတ်သောအယူဝါဒ ၁၅၈၂) မည်သည့်အခါမျှ တရားမ၀င် ပျက်ပြယ်သည်ဟူပြီး မရှိကြောင်း (ကာနွန် ဥပဒေ ၂၉၀)၊ ကာနွန်ဥပဒေအရ လူဝတ်လဲခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာဆရာတော် ကြီးများက ရဟန်းမင်းကြီးရုံးတော်သို့ လျှောက်ထားတောင်းခံရပြီး၊ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိမှသာလျှင် ကာနွန်ဥပဒေအရ လူဝတ်လဲခြင်း ပြုနိုင်ကြောင်း (ကာနွန်ဥပဒေ ၁၀၇၈၊ အပိုဒ် ၂၊ ၁)၊ ကာနွန်ဥပဒေအရ လူဝတ်လဲထားသောရဟန်းသည် ရဟန်းတို့နှင့်သာသက် ဆိုင်ပြီး ရဟန်းများသာဆောင်ရွက်ရမည့် အမှုတော်မြတ်များမှ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း (မြတ်သောအယူဝါဒ ၁၅၈၃)၊ ထို့ကြောင့် ဒီလောကတွင် ကာနွန်ဥပဒေအရ လူဝတ်လဲထားသောရဟန်းသည် အပြင်ပန်းအားဖြင့် ရဟန်းများသာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သော အမှုတော်မြတ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိဘဲ သာမန်လူပုဂ်္ဂိုလ်ကဲ့သို့ လုပ်ကိုင်နေထိုင် စားသောက်ခြင်း ကိုသာ မြင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖာသာရ် (သို့မဟုတ်) ကိုယ်တော်ဟု သုံးနှုန်းခေါ်ဆိုခြင်းမပြုရကြောင်း၊ ရဟန်းတို့၏ ၀တ်ရုံသင်္ကန်း တို့ကို ဆင်မြန်းဝတ်ဆင်ခွင့် မရှိကြောင်း၊ သို့သော်လည်း သာမန်ဘာသာဝင်လူပုဂ်္ဂိုလ်ပြန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းကို ကာနွန်ဥပဒေအရ ရဟန်းအဖြစ်အခြေအနေပျောက်ပြက်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ဆုံးရှုံးခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း (ကာနွန်ဥပဒေ ၂၉၀-၂၉၃)၊ ကာနွန်ဥပဒေအရ လူဝတ်လဲထားသောရဟန်းသည် ကယ်တင်ခြင်းစက်္ကရမင်များကို ကြီးလေးသောအကြောင်းတစ်စုံ တရာ ကြောင့် ဆောင်ရွက်ရသော် ကာနွန်ဥပဒေအရာ တရားမ၀င် (illicit) သော်လည်း ကျိုးကြောင်းညီညွတ်သော အကျိုးရှိ (valid) စေသည်ဖြစ်ရာ သိကာရရဟန်းအမှုတော်ဆောင်၏မထိုက်တန်ခြင်းသည် ခရစ်သခင်ကြွလာခြင်းကို မပိတ်ပင်မတား ဆီးနိုင်ကြောင်း၊ (Council of Trent: DS 1612; 1154) ဤမေးမြန်း ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆွေးနွေးစရာများစွာ ကျန်ရှိပေရာ၊ ကာနွန်ဥပဒေပညာရှင်များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်လျှင် ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါ သည်။
ကက်သလစ်ဘာသာဝင်အမျိုးသမီးနှင့်အိမ်ထောင်ပြုသော နှစ်ခြင်းဘာသာဝင်အမျိုးသားက ““ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးက စိန်မေရီ ဘုရားကျောင်းဖက်ကို သွားလည်ရအောင်လို့ ပြောရင်း ဒီကိုရောက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ကက်သလစ်သာသနာတော်ရဲ့သွန်သင် ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီနေ့ဟောပြောကနေ အများကြီးလေ့လာသင်ယူခွင့် ရရှိခဲ့တာမို့ ကျွန်တော်အတွက် အင်မတန်မှအကျိုး ရှိပါကြောင်း”” ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အသက် ၅၀ ၀န်းကျင်ရှိသော ကချင်လူမျိုးအမျိုးသားတစ်ဦးကလည်း ““ကျွန်တော်အခု အသက်အရွယ်အထိ ယုံကြည်ရာအချက်ပေါင်း ဒီလောက်ရှိတယ်ဆိုတာ ဒီနေ့မှ သိပါကြောင်း၊ အခုလိုဟောပြောဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပပေးသော ဂလိုရီယာသတင်းဂျာနယ်တိုက်နဲ့ဘုန်းဘုန်းသက်တင်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း၊ နောင်တွင်လည်း ဒီလိုမျိုး ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲမျိုးကို ၆ ရက်လောက် ကြာအောင် လုပ်ပေးစေချင်ကြောင်း၊ ဒါမှပဲ ယုံကြည်ရာအချက်များရဲ့ တစ်ခုစီကို အသေးစိတ်သိလာပြီး ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာလည်း ပိုပြီးခိုင်မာလာမှာ ဖြစ်ကြောင်း”” ဖြင့် ရင်ဖွင့်စကားပြောကြားပေးသည်။
ကက်သလစ်သာသနာတော်မှ ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသော ယုံကြည်ရာအချက်များ
၁။ ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသော ဘုရားသခင်ကို ဖန်ဆင်းခံရသောသက်ရှိသက်မဲ့များ၏ ဆင်ခြင်တုံတရား၏ သဘာဝ အလင်းရောင် ဖြင့်သာ သေချာစွာသိရှိနိုင်သည်။
၂။ မြတ်စွာဘုရားသခင်၏တည်ရှိနေခြင်းသည် သဘာဝဆင်ခြင်တုံအသိတရားအပေါ်တွင်သာ မူတည်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ၊ သဘာဝ ထက် လွန်ကဲသောယုံကြည်ခြင်းအပေါ်တွင်လည်း မူတည်နေသည်။
၃။ ပုထုဇဉ်လူသားတို့၏နားလည်မှုက မြတ်စွာဘုရားသခင်၏ သဘာဝကို နားမလည်နိုင်ပေ။
၄။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင် ရှိနေသော သူတော်သူမြတ်သည် ဘုရားရှင်မြတ်၏ အနှစ်သာရကို ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သော အသိတရား ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
၅။ ဘုရားရှင်မြတ်၏ လျှပ်တစ်ပြက်မျှော်မှန်းချက်သည် ပုထုဇဉ်လူသားတို့ဝိညာဉ်၏ ပင်ကိုယ်ထိုးထွင်းသိမြင်စွမ်းထက် သာလွန်သည့် အပြင် သဘာဝထက် လွန်ကဲသည်။
၆။ ပုထုဇဉ်လူသား၏၀ိညာဉ်သည် မြတ်စွာဘုရားသခင်၏ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းကို ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ဘုန်းဂုဏ်တော်၏အလင်းတော် ကို လိုအပ်သည်။
၇။ မြတ်စွာဘုရားသခင်၏တည်ရှိနေခြင်းသည် ကောင်းကင်ဘုံရှိ သူတော်သူမြတ်များပင် နားမလည်နိုင်ပေ။
၈။ ဘုရားဂုဏ်တော်များသည် ၄င်းဂုဏ်တော်များအကြားတွင် ထပ်တူဖြစ်နေကြသည့်အပြင် ဘုရားရှင်မြတ်၏အနှစ်သာရများနှင့် လည်း တစ်ထပ်တည်း ဖြစ်နေကြသည်။
၉။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် အကြွင်းမဲ့ ပြည့်စုံတော်မူသည်။
၁၀။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် ပြည့်စုံခြင်းတိုင်း၌ အနှိုင်းမဲ့တော်မူသည်။
၁၁။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် အကြွင်းမဲ့ရိုးစင်းတော်မူသည်။
၁၂။ ဤစကြာဝဋာတစ်ခုလုံး၌ ဘုရားတစ်ဆူတည်းသာ ရှိတော်မူသည်။
၁၃။ တစ်ဆူတည်းသာ ရှိတော်မူသော် မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် ယထာဘူတဆိုင်ရာအသိတရားတွင်မူ စစ်မှန်သော ဘုရား သခင် ဖြစ်တော်မူသည်။
၁၄။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း၏ အနှိုင်းမဲ့တန်ခိုးတော်ကို ပိုင်ဆိုင်တော်မူသည်။
၁၅။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် အကြွင်းမဲ့ မှန်ကန်ခြင်း ဖြစ်တော်မူသည်။
၁၆။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် အကြွင်းမဲ့ သစ်္စာရှိခြင်း ဖြစ်တော်မူသည်။
၁၇။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် မိမိအရှင်တော်မြတ်၌လည်းကောင်း၊ ယထာဘုတဆိုင်ရာ ကောင်းမြတ်တော်မူခြင်းနှင့် တခြားသူများ နှင့် ဆက်ဆံရာတွင်လည်းကောင်း ဖြစ်တော်မူသည်။
၁၈။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် အကြွင်းမဲ့ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်ခြင်း ဖြစ်တော်မူသည်။
၁၉။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် အကြွင်းမဲ့ ကြင်နာခြင်း ဖြစ်တော်မူသည်။
၂၀။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် အကြွင်းမဲ့ (ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ) ထာဝရတည်ရှိသော ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။
၂၁။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် ထာဝရ ဖြစ်တော်မူသည်။
၂၂။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် အကြွင်းမဲ့ တိုင်းတာမှုကင်းမဲ့သော အနန်္တဘုရား ဖြစ်တော်မူသည်။
၂၃။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် ဖန်ဆင်းခံအရာအားလုံးတို့၌ တည်ရှိနေတော်မူသည်။
၂၄။ မြတ်စွာဘုရားသခင်၏ သိခြင်းသည် အသင်္ချေ (မရေမတွက်နိုင်) ဖြစ်တော်မူသည်။
၂၅။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် သာမန်အသိတရားတစ်ခုက သိလိုက်သော ဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံးကို သိတော်မူသည်။
၂၆။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် အတိတ်၊ ပစ်္စုပန်နှင့်အနာဂါတ်တွင် အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်သောအရာအားလုံးကို သိမြင်တော်မူ သည်။
၂၇။ အနာဂါတ်ကို ကြိုတွေးသိမြင်သောအသိတရားအားဖြင့် မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် မမှားယွင်းနိုင်သော အဖြစ်တရားနှင့်အတူ ဆင်ခြင်တုံတရားရှိသတ်္တ၀ါများ၏ လွတ်လပ်စွာပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်များကို ကြိုတင်သိမြင်တော်မူသည်။
၂၈။ မြတ်စွာဘုရားသခင်၏ ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်သောအလိုတော်သည် အသင်္ချေ ဖြစ်တော်မူသည်။
၂၉။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် မိမိကိုယ်ကို လိုအပ်မှုအပေါ် နှစ်သက်တော်မူသေ်ာလည်း တဖက်တွင်မူ လွတ်လပ်မှုအပြည့်ဖြင့်၊ ဘုရားထက်ပိုသောအရာများ၏ ဖန်ဆင်း ခြင်းကိုလည်း နှစ်သက်တော်မူသည့်အပြင် အလိုရှိတော်မူသည်။
၃၀။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် တန်ခိုးတော် ဖြစ်တော်မူ၏။
၃၁။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်ရှိအရာများနှင့်ကမ်္ဘာမြေကြီးတို့၏ အရှင်သခင် ဖြစ်တော်မူ၏။
၃၂။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် အကြွင်းမဲ့ တရားမျှတခြင်း ဖြစ်တော်မူ၏။
၃၃။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် အကြွင်းမဲ့ သနားကြင်နာခြင်း ဖြစ်တော်မူသည်။
၃၄။ မြတ်စွာဘုရားသခင်၌ ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟူ၍ ပုဂ်္ဂိုလ်သုံးပါး ရှိတော်မူ၏။ ပုဂ်္ဂိုလ်တစ် ပါးစီသည် ဘုရားအဖြစ်တော်တစ်ခုစီကို ပိုင်ဆိုင်တော်မူ၏။
၃၅။ မြတ်စွာဘုရားသခင်၌အတွင်းကျသောဘုရားအဖြစ်တော်၏ဖြစ်စဉ် နှစ်ခု ရှိတော်မူ၏။
၃၆။ မြင့်မြတ်တော်မူကြသော ပုဂ်္ဂိုလ်များသည် ဘုရားအဖြစ်တော်၏ ပင်ကိုယ်၌ မဟုတ်ဘဲ အတွင်းကျသောဘုရား အဖြစ်တော် ဖြစ်စဉ်၏ ပုဂ်္ဂိုလ်များ ဖြစ်တော်မူကြသည်။
၃၇။ ဒုတိယမြောက်သော ပုဂ်္ဂိုလ်ဘုရားသည် ပထမသောပုဂ်္ဂိုလ်ဘုရားထံမှ မျိုးဆက်အလိုက် ဖြစ်ပေါ်လာတော်မူပြီး သူတို့နှစ်ပါး အကြား၌ သားနှင့်အဖဟူ၍ ဆက်နွယ်မှု ရှိတော်မူသည်။
၃၈။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသည် ခမည်းတော်နှင့်သားတော်ထံတော်မှ တစ်ခုတည်းသော လုပ်စဉ်တွင် တစ်ခုတည်းသော ဆက်နွယ်ခြင်းမှ ဖြစ်တော်မူသည်။
၃၉။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသည် မျိုးဆက်ဖြစ်ပွားခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ဘဲ ခမည်းတော်နှင့်သား တော်တို့မှ ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်တော်မူသည်။
၄၀။ မြတ်စွာဘုရားသခင်အတွင်းရှိ ဆက်ဆံမှုများသည် ဘုရားဇာတိတော်နှင့်အတူ တစ်ထပ်တည်း ဖြစ်တော်မူသည်။
၄၁။ ပုဂ်္ဂိုလ်သုံးပါးတို့သည် တစ်ပါးတည်းထဲတွင် ရှိတော်မူကြသည်။
၄၂။ ဘုရားသခင်၏ လုပ်ငန်းတော်များအားလုံးသည် ပုဂ်္ဂိုလ်သုံးပါးနှင့်အတူတူပင် ဖြစ်တော်မူသည်။
၄၃။ မြတ်စွာဘုရားသခင်၏အပြင်ဖက်တွင် တည်ရှိသောအရာအားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ ဗလာနတိအဖြစ်မှ ဖန်ဆင်းခံထား သော အရာများ ဖြစ်ကြသည်။
၄၄။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် မိမိကောင်းမြတ်တော်မူခြင်း၏ နှိုးဆော်ပေးမှုကြောင့် ကမ်္ဘာကြီးကို ဖန်ဆင်းတော်မူသည်။
၄၅။ ဤကမ်္ဘာကြီးသည် မြတ်စွာဘုရားသခင်အား ဘုန်းဂုဏ်တော်တိုးတက်စေရန်အတွက် ဖန်ဆင်းခြင်း ခံရသည်။
၄၆။ ပုဂ်္ဂိုလ်သုံးပါးတို့သည် တစ်ခုတည်းသော ဖန်ဆင်းခြင်း၏ဘုံနိယာမ ဖြစ်တော်မူသည်။
၄၇။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် ပြင်ပတွန်းပို့မှုကင်းပြီး အတွင်းပိုင်းလိုအပ်ချက်ကြောင့် ဤကမ်္ဘာကြီးကို ဖန်ဆင်းတော်မူသည်။
၄၈။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် ကောင်းမွန်သောကမ်္ဘာကြီးကို ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သည်။
၄၉။ ကမ်္ဘာကြီးသည် အချိန်မှီအစ ရှိခဲ့သည်။
၅၀။ မြတ်စွာဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းကသာ ကမ်္ဘာကြီးကို ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သည်။
၅၁။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် တည်ရှိခြင်းတရားထဲ၌ ဖန်ဆင်းခံအားလုံးကို ထိန်းသိမ်းထားတော်မူသည်။
၅၂။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် အရှင်မြတ်၏ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင် အရှင်မြတ်ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သောအရာအားလုံး တို့ကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့်လမ်းညွှန်ပြပေးတော်မူသည်။
၅၃။ ပထမဆုံးသော ပုထုဇဉ်လူသားကို မြတ်စွာဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းတော်မူသည်။
၅၄။ ပုထုဇဉ်လူသား၌ ၀တ်္တုပိုင်းဆိုင်ရာခန်္ဓာကိုယ်နှင့် ၀ိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ စိတ်ဝိညာဉ်နှစ်ခုတို့ကို ပိုင်ဆိုင်တော်မူသည်။
၅၅။ ဆင်ခြင်တုံတရားရှိသော ၀ိညာဉ်သည် လူ့ခန်္ဓာကိုယ်၏ အရေးပါသောပုံစံတစ်ခု ဖြစ်သည်။
၅၆။ ပုထုဇဉ်လူသားတစ်ဦးသည် ၀ိညာဉ်ကိုယ်စီ ပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်။
၅၇။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် သဘာထက်လွန်ကဲသော ပန်းတိုင်ကို အပ်နှင်းပေးတော်မူခဲ့သည်။
၅၈။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဆုံးသောမိဘနှစ်ပါးတို့သည် နတ်ဆိုးလက်အောက်သို့ မကျရောက်မှီတွင်မူ၊ ဖြူစင်ခြင်းကျေးဇူးတော်ကို ရရှိတော်မူခဲ့ကြသည်။
၅၉။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဆုံးသောမိဘနှစ်ပါးတို့သည် ခန်္ဓာကိုယ်မပျက်စီးနိုင်သော ဆုကျေးဇူးတော်ကို ပေးအပ်ခြင်း ခံခဲ့ကြရသည်။
၆၀။ ပါရာဒီဇူးထဲတွင် နေခဲ့ကြသော ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဆုံးသောမိဘနှစ်ပါးတို့သည် ဘုရားရှင်မြတ်၏ စမ်းသပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပညတ် တော်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းအားဖြင့် ကြီးလေးသော အပြစ်ကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။
၆၁။ ကျွန်ုပ်တို့ကနဦးမိဘနှစ်ပါးတို့၏ အပြစ်ကြောင့် ဖြူစင်ခြင်းကျေးဇူးတော်ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရပြီး ဘုရားရှင်မြတ်၏ အမျက်နှင့် ဒေါသ များကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။
၆၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဆုံးသောမိဘနှစ်ပါးတို့သည်သေခြင်းတရား၏ တရားခံများနှင့် နတ်ဆိုး၏လွမ်းမိုးမှုတို့၏ သားကောင် ဖြစ်ခဲ့ကြရသည်။
၆၃။ အာဒံ၏အပြစ်သည် အတုယူခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ မျိုးဆင်းသက်ခြင်းဖြင့် သားစဉ်မြေးဆက်အဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းစေသည်။
၆၄။ အပြစ်ရင်းသည် သဘာဝမျိုးဆက်ခြင်းဖြင့် ကူးပြောင်းသွားသည်။
၆၅။ အပြစ်ရင်းအခြေအနေတွင် ပုထုဇဉ်လူသားသည် ဖြူစင်ခြင်းကျေးဇူးတော်မှ ကင်းကွာနေပြီး လူသားအားလုံးထံသို့ အကျုံးဝင် စေသည့်အပြင် ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်း၏ သဘာဝကိုလွန်ဆန်သော ဆုလက်ဆောင်နှင့်လည်း ကင်းကွာစေသည်။
၆၆။ အပြစ်ရင်းအခြေအနေ၌ ယခုဘ၀မှသေဆုံးကြသူများ၏၀ိညာဉ်များသည် မြတ်စွာဘုရားသခင်၏ ပီတိသောပန သာဖြစ်သော မျှော်လင့်ချက်မှ ထုတ်ပယ်ခံကြရသည်။
၆၇။ ကမ်္ဘာဦးအစကပင်၊ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် ဘာမှမရှိခြင်းမှ ၀ိညာဉ်ခန်္ဓာသာ ရှိကြသော သိကြားတမန်များကို ဖန်ဆင်းတော် မူသည်။
၆၈။ ကောင်းကင်သိကြားတမန်များ၏ သဘာဝကား ၀ိညာဉ် ဖြစ်သည်။
၆၉။ ကောင်းမြတ်တော်မူသော သိကြားတမန်များ၏ ဒုတိယတာဝန်သည်ကား လူသားများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်နှင့် လူသားတို့၏ကယ်တင်ခြင်းကို ဂရုစိုက်ပေးရန် ဖြစ်တော်မူသည်။
၇၀။ နတ်ဆိုးသည် အာဒံ၏အပြစ်ကြောင့် လူသားများအပေါ် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လွမ်းမိုးခွင့်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
၇၁။ ယေဇူးခရစ်တော်ဘုရားသည် စစ်မှန်သောဘုရား၊ ဘုရားရှင်မြတ်၏စစ်မှန်သောသားတော် ဖြစ်တော်မူသည်။
၇၂။ ယေဇူးခရစ်တော်ဘုရားသည် အပေါ်ယံဖြစ်သော ခန်္ဓာကိုယ်မဟုတ်ဘဲ၊ စစ်မှန်သောခန်္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်တော်မူသည်။
ဃ့မငျအျျေကာနိမေနေူ ဘသိပယ ညသအ ညေ စေစမေနညအ ဘသိပ.
၇၃။ ယေဇူးခရစ်တော်ဘုရားသည် ခန်္ဓာကိုယ်သာမက ဆင်ခြင်တုံတရားရှိသော ၀ိညာဉ်ကို သိမ်းပိုက်တော်မူသည်။
၇၄။ ယေဇူးခရစ်တော်ဘုရားသည် အာဒံ၏သမီးတော်ဖြစ်တော်မူသော ကညာစင်မာရီယားမှ ဖွားမြင်တော်မူသည်။
၇၅။ ဘုရားအဖြစ်တော်နှင့်လူ့အဖြစ်တော်နှစ်ပါးတို့သည် ယေဇူးခရစ်တော်၌ ပုဂ်္ဂိုလ်သုံးပါးတို့ ပေါင်းစည်းတော်မူပြီး ပုဂိ်္ဂုလ်တစ်ပါး ၌ ၄င်းအဖြစ်တော်နှစ်ပါးတို့သည် ပေါင်းစပ်ထားတော်မူသည်။
၇၆။ ခရစ်တော်ယေဇူး၏လူ့အဖြစ်ယူခြင်းသည် တစ်ခုတည်း၊ တစ်ပါးတည်း ဖြစ်တော်မူသည်။ ခရစ်တော်အရှင်မြတ်သည် တချိန် တည်း၌ ဘုရားသခင်နှင့်လူ ဖြစ်တော်မူသည်။
၇၇။ မြတ်စွာဘုရားသခင်နှင့်နှုတ်ကပတ်တော်တို့သည် အတွင်း၊ ခန်္ဓာကိုယ်နှင့်အရာဝတုပိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည် ပေါင်းစည်းခြင်းတို့ကို အသွေးအသားဖြင့် ဆက်စပ်တော်မူသည်။
၇၈။ ယေဇူးခရစ်တော်ဘုရား၏ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ရှေ့ဦးဖခင်ကြီးများထဲတွင် အခိုင်အမာပြောဆိုထားသော လူသား နှင့်ဘုရားဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ပုဂ်္ဂိုလ်နှစ်ဦးအကြား၊ လူသားနှင့်ခရစ်တော်၊ ဘုရားသခင်နှင့်နှုတ်ကပတ်တော်၊ တွင် ခွဲခြားမည်မဟုတ်ဘဲ လူ့အဖြစ်ကို ယူတော်မူသော နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တော်မူသော ခရစ်တော်တစ်ပါးတည်းနှင့်သာ သက်ဆိုင်တော်မူသည်။ ၄င်းသည် ခန်္ဓာကိုယ်တွင် နာကြင်မှုကို ခံယူပြီး လက်ဝါးကားတိုင်တင်ခံရခြင်း၊ အသေခံတော်မူခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် ဖြစ်တော်မူသည်။
၇၉။ သန့်ရှင်းသောကညာစင်သည် မြတ်စွာဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကိုယ်ဝန်လွယ်ပြီး လူ့အဖြစ်ကို ယူတော်မူသော အချိန်မှစပြီး ဘုရားသခင်၏မိခင် ဖြစ်တော်မူသည်။
၈၀။ ပုဂ်္ဂိုလ်သုံးပါးတို့၏ တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ခြင်းထဲတွင် ယေဇူးခရစ်တော်ဘုရား၏ ဘုရားအဖြစ်နှင့်လူ့အဖြစ်နှစ်ပါးတို့သည် တခြားပုဂ်္ဂိုလ်တို့နှင့် မပြောင်းမလဲ၊ မရောမနှော၊ မထိမခိုက်ဘဲ မူလအတိုင်း ရှိတော်မူသည်။
၈၁။ ယေဇူးခရစ်တော်ဘုရားတွင် ရှိတော်မူသော အဖြစ်တော်နှစ်ပါးတို့သည် တစ်ခုစီ၏ပင်ကိုယ်ဆနနှင့် တစ်ခုစီ၏ ပင်ကိုယ်လုပ် ဆောင်ချက်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတော်မူသည်။
၈၂။ ယေဇူးခရစ်တော်ဘုရား၏ လူ့အဖြစ်တော်နှင့် ခမည်းတော်ဘုရားတို့၏ တစ်လုံးတ၀ည်းဖြစ်ခြင်းသည် သနေတည်သော အချိန်မှ စတင်သည်။
၈၃။ ပုဂ်္ဂိုလ်သုံးပါးတို့၏ ပေါင်းစည်းခြင်းသည် မည်သည့်အခါမျှ ရပ်ဆိုင်းမည်မဟုတ်။
၈၄။ ပုဂ်္ဂိုလ်သုံးပါးတို့၏ ပေါင်းစည်းခြင်းသည် ၄င်းပုဂ်္ဂိုလ်သုံးပါးတို့၏ ဘုံလှုပ်ရှားခြင်းထဲတွင် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်။
၈၅။ ဒုတိယမြောက်သော ပုဂ်္ဂိုလ်ဘုရားမြတ်သည်သာ လူ့အဖြစ်ကို ယူတော်မူသည်။
၈၆။ ယေဇူးခရစ်တော်အရှင်မြတ်သည် ဘုရားအဖြစ်သာမဟုတ်၊ လူ့အဖြစ်ဖြင့်လည်း ဘုရားသခင်၏သဘာဝ သားတော် ဖြစ်တော်မူသည်။
၈၇။ ဘုရားနှင့်လူ့အဖြစ်နှစ်ခုတို့ကို ပိုင်ဆိုင်တော်မူသော ယေဇူးခရစ်တော်ဘုရားကို မြတ်စွာဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာ ထိုက်တန်တော်မူသော တစ်ခုတည်းသော ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုမျိုးဖြင့် ရိုသေခြင်းကို ပြုကြရမည်။
၈၈။ ယေဇူးခရစ်တော်၏ ဘုရားနှင့်လူ့အင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို တစ်ခုတည်းသောလူ့အဖြစ်ယူတော် မူသော နှုတ်က ပတ်တော်အဖြစ်သာ ရည်ညွန်းတော်မူခြင်းကို ရရှိရမည်။
၈၉။ ယေဇူးခရစ်တော်သည် အပြစ်ရင်းနှင့် လူတစ်ဦးစီ၏အပြစ်များမှ လုံးဝကင်းစင်တော်မူသည်။
၉၀။ ယေဇူးခရစ်တော်၏လူ့ဇာတိသည် အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့်ဒုက်္ခခံနိုင်စွမ်း ရှိတော်မူသည်။
၉၁။ မြတ်စွာဘုရားသခင်၏သားတော်သည် ပုထုဇဉ်လူသားများကို ကယ်တင်ရန်အလို့ဌါ၊ လူ့အဖြစ်ကို ယူတော်မူသည်။
၉၂။ အပြစ်ထဲသို့ကျရောက်သွားသော ပုထုဇဉ်လူသားသည် မိမိကိုယ်ကို ကယ်တင်နိုင်ခြင်း မရှိပေ။
၉၃။ ဘုရားနှင့်လူသားဖြစ်တော်မူသော ယေဇူးခရစ်တော်သည် ရဟန်းချုပ် ဖြစ်တော်မူသည်။
၉၄။ ယေဇူးခရစ်တော်ဘုရားသည် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် စစ်မှန်ပြီး ကောင်းမွန်သော ပူဇော်ခြင်းမျိုးဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ပူဇော် ဆက်သတော်မူခဲ့သည်။
၉၅။ ခရစ်တော်ယေဇူးသည် လက်ဝါးကားတိုင်တော်တွင် မိမိ၏ဆက်ကပ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်နွံထဲမှ ပြန်လည် ကယ်နှုတ်တော်မူပြီး ဘုရားသခင်နှင့် မိမိတို့အား ပြန်လည်ကြေအေးသင့်မြတ်စေတော်မူခဲ့သည်။
၉၆။ ယေဇူးခရစ်တော်သည် ကြိုတင်စီစဉ်ထားသော သေခြင်းမျိုးဖြင့် အသေခံတော်မူသည် မဟုတ်။
၉၇။ ယေဇူးခရစ်တော်၏ လူသားများအတွက် ပေးဆပ်အသေခံခြင်းသည် သစ်္စာဖောက်သော သိကြားတမန်များထံသို့ အကျိုးသက် ရောက်ခြင်း မရှိပေ။
၉၈။ ယေဇူးခရစ်တော်ဘုရားသည် မိမိ၏ဒုက်္ခခံခြင်းနှင့်သေခြင်းတို့အားဖြင့် ဘုရားသခင်ထံတော်မှ ဆုချပေးခြင်းကို လက်ခံရရှိ တော်မူသည်။
၉၉။ ယေဇူးခရစ်တော်ဘုရားသည် အသေခံတော်မူပြီးနောက်၊ အရှင်မြတ်၏၀ိညာဉ်တော်သည် အရှင်မြတ်၏ခန်္ဓာတော်နှင့် သီးခြား ခွဲထားခြင်းကို ခံရတော်မူပြီး ဒုစရိုက်လောကထဲသို့ ဆင်းသက်တော်မူသည်။
၁၀၀။ ယေဇူးခရစ်တော်သည် အသေခံတော်မူပြီးနောက် သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် သေခြင်းမှ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးစွာဖြင့် ရှင်ပြန် ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။
၁၀၁။ ယေဇူးခရစ်တော်ဘုရားသည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ ခန်္ဓာနှင့်ဝိညာဉ်တို့နှစ်ပါးဖြင့် တက်ကြွတော်မူပြီး ခမည်းတော်ဘုရား၏ လင်္ကျာတော်ဘက်တွင် ထိုင်နေတော်မူသည်။
၁၀၂။ မယ်တော်မာရီယားသည် ဘုရားသခင်၏ မိခင် ဖြစ်တော်မူသည်။
၁၀၃။ မယ်တော်မာရီယားသည် အပြစ်ရင်း အစွန်းမထင်ဘဲ သနေ်္ဓတည်ခြင်းကို ခံရတော်မူသည်။ ဂျိုးဇက်ကုန်ဇမှုန်း
(ကျန်ရှိသော အချက်များကို ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမည်။)
Previous: ဘာသာရေးနှင့် လူမျိုးရေးကို ခွဲခြားသူသည် နိုင်ငံ့ရန်သူ ဖြစ်သည်ဟု ရန်ကုန် ကာဒီနယ် ချားလ်စ်ဘို မိန့်ကြား